IPlasma 5.18 elungiselelwe uFebruwari, iya kuba luhlobo lweLTS | Ubunlog
IPlasma itshintshe kakhulu kule minyaka idlulileyo. Eyona nto ibonakalisa kakuhle, okanye ubuncinci umntu okhe wayiphila enyameni yakhe, ngumncedisi: ngo-2015-2016, ndizamile uKubuntu kwakhona kwiLaptop yam yesibini kwaye ndiyayithanda imbonakalo yayo kunye nezinto ezinokwenzeka, kodwa zasilela kum kwaye lonto indenze ndabuyela ku-Ubuntu. Kulo nyaka ndizamile kwakhona, kwakwikhompyuter enye ... kwaye andisashukumi. Kwakhona, uphuculo olukhulu kunye nohlobo olutsha lweLTS luza: IPlasma 5.18.
Ngokukhutshwa kwePlasma 5.16 kweza iindaba ezinomdla, ezinje ngenkqubo entsha yokwazisa (endiya kuyiphucula ngokukuvumela ukuba uye kwiapps ekwazisa ngokunqakraza kwisaziso sakho). Inguqulelo elandelayo iya kuba yi-v5.17, kwaye iya kwazisa amanqaku amaninzi kangangokuba kuya kuba nzima ukubongeza onke kwinqaku elinye. Kwelinye icala, sine-v5.12, eyeyona nguqulelo yeLTS inde exhaswa, kodwa ngaphandle kweempawu zamva nje. IPlasma 5.18 iya kuba kukukhutshwa kwe-LTS esele icwangciselwe uFebruwari 2020.
IPlasma 5.18 iza Kubuntu 20.04
Njengoko kuchaziwe kwi- ngeposi Kuthunyelwe kutshanje, kukho izinto ezimbini "ezinkulu" ezithathe inxaxheba kolu khululo. Abakhankanyanga ukuba zeziphi, kodwa uKubuntu sele etshilo ukuba amaxesha afanelekileyo afanelekile ukuba abandakanywe kwiKubuntu 20.04 ngenxa ka-Epreli 2020:
IPlasma 5.18 eza kukhutshwa ngoFebruwari 2020 ngoku icwangciselwe ukuba ikhutshwe yi-LTS. https://t.co/psKhaxmflD
Oku kufanelekile ngokugqibeleleyo ngeKubuntu 20.04 LTS ngo-Epreli.
-Kubuntu (@kubuntu) Septemba 11, 2019
IPlasma 5.18 iya kukhutshwa ngoFebruwari 2020, ngoku icwangciselwe ukukhutshwa kweLTS. Oku kufanelekile ngokugqibeleleyo ngeKubuntu 20.04 LTS ngo-Epreli.
Ezinye iinkcukacha abazikhankanyayo kwi-imeyile yabo:
Iya kuxhomekeka kwi-Qt 5.12.
IPlasma 5.12 iya kufumana kuphela iindawo ezibalulekileyo kwakhona.
IPlasma 6.0 iya kuphuhliswa ngaxeshanye nenguqulelo entsha yeLTS.
Ngokusengqiqweni, ngeli xesha akukho nto iyaziwayo malunga neendaba eziya kuziswa nguqulelo olucwangciselwe uFebruwari. Siza kuzifumanisa kwiinyanga ezizayo kwaye sinokufaka ingxelo entsha ukuba sisebenzisa i-KDE Backports repository okanye inkqubo efana ne-KDE neon.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Iidesika » KDE » IPlasma 5.18 elungiselelwe uFebruwari, iya kuba luhlobo lweLTS
I-Bionic Beavers kunye neXenial Xeruses: hlaziya i-kernel yakho kwakhona. Ukuyilungisa, i-Canonical yazisa ukulungiswa kwakhona